FIAINAM-BAHOAKA : Hanangana vovonana hiadiana amin’ny kolikoly ny FFKM
Vita soa aman-tsara tany Mananjary ny fivorian’ny kaomity foiben’ny FFKM faha42 nandritra ny telo andro izay nifarana ny alahady lasa teo. 3 décembre 2019
Anisany nodinihina nandritra izany ny momba ny fiainana anatin’ny FFKM, ny fiaraha-mitory ny Vaovao Mahafaly ary ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny. Mahakasika ity farany manokana dia nanamafy ny ady amin’ny kolikoly eto amin’ny firenena ny FFKM. Toherin’izy ireo ny endrika kolikoly amin’ny lafiny rehetra, ny fanaovana tsindry hazo lena ny vahoaka madinika sy fisian’ireo tsy matimanota. Manana adidy ny FFKM ny hanampy izay rehetra iharan’ny tsindry hazo lena, iharan’ny fitaka sy ny tsy rariny kanefa tsy afa-manoatra.
Tapaka, araka izany nandritra an’ity fivoriam-be ity fa hisy ny vovonana hatsangan’ny FFKM hiady amin’ny kolikoly. Miampy ireo dia miantso ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky sy hitondra vahaolana faran’izay haingana manoloana ny olana madinidinika mihatra amin’ny fiainam-bahoaka ny FFKM. Takin’izy ireo amin’ny fanjakana ny hametrahana tetiandro matotra ho amin’ny famahana an’ireo olana ireo. Ireo Raiamandreny teo anivon’ny FFKM hatramin’izay dia nijoro ho mpanara-maso akaiky ny raharaham-pirenena ary niezaka nitondra tsikera hatrany raha toa ka nisy ny tsy fietezana teo amin’ny fitantanana. Ny FFKM ihany koa, araka ny fanambaràna nataon’izy ireo hatrany tao anatin’ity fehin-kevitra dia niezaka nandray ny andraikiny tamin’ny fanomanana ny olona hiatrika fifidianana mba hanefa ny adidiny sy hitandro ny fahamarinana hatrany.
Ankoatra izay dia anisany tapaka nandritra ity fivoriam-be faha42 nataon’ny birao foiben’ny FFKM ity fa ilaina ny fisokafana amin’ny fiangonana kristianina samihafa. Hankalazana ny faha40 taona ny FFKM, hisy araka izany ny hetsika hataon’izy ireo toy ny fambolen-kazo iombonana hatao isam-paritany. Hatsangana ny radio iraisan’ny fiangonana mivondrona ao anatin’ny FFKM ho tsangam-baton’izay faha40 taona izay.